अदभुत मुसा : मुसाले यसरी बचाइरहेको छ हजारौँ मानिसको ज्यान ! (तस्बिरसहित) - Sidha News
अदभुत मुसा : मुसाले यसरी बचाइरहेको छ हजारौँ मानिसको ज्यान ! (तस्बिरसहित)
एजेन्सी। मुसाबाट हामी कुनै न कुनै प्रकारले समस्यामा छौँ । कहिले के खाइदिएर त कहिले सामान लगिदिएर हामी समस्यामा पर्छौँ । खानेकुरा बर्बाद गर्नेमा मुसा पनि अग्रस्थानमा आउँछ । कम्बोडियामा भने मुसालाई हिरो मानिन्छ । त्यहाँ मुसाले हजारौँ मानिसको ज्यान बचाएको छ । सियेम रीप प्रान्तको एक गाउँमा झण्डै ८ लाख बर्गविमटर जमिनमा बारुदी सुरुङ खोजेर नष्ट गर्नमा मुसाले सहयोग गरिरहेको छ ।
मुसाले बारुदी सुरुङ नष्टगर्न सहयोग गरेपछि १९ कम्बोडियाली परिवार आफ्नो ठाउँमा जान पाएका छन् । मुसाले १ सय ७० बारुदी सुरुङ खोजी सकेको छ । लामो समयदेखि जमिन मुनी रहेका सुरुङ खोजेर नष्ट गर्न कम्बोडियाले मुसाको प्रयोग गरेको छ । अहिलेसम्म मुसाले तीन महिनामा यस्तो काम गरिसकेको छ । सरकारले बारुदी सुरुङ खोज्नका लागि मुसालाई तालिम दियो । सन् १९९७ मा गठन भएको एपोपो नामक संस्थाले यस्तो कामको जिम्मेवारी मुसालाई दिएको थियो ।
मुसाको मद्दतमा कम्बोडिया, अंगोला, जिम्बावे र कोलम्बियामा पनि अपोपो नामक संस्थाले बारुदी सुरुङ नष्ट गरेर लाखौँ व्यक्तिको ज्यान बचाएको छ । मुसाले अहिलेसम्म यी सबै देशमा १ लाख ३८ हजार भन्दा धेरै बारुदी सुरुङ नष्ट गरिसकेका छन् । अपोपो नामक संस्थासँग अहिले १ सय ५१ मुसा छन् । त्यसमध्ये २६ ले प्रजनन्को काम गर्छन् । ५३ ले बारुदी सुरुङको खोज्न सक्रिय छन् । ३९ मुसा अनुसन्धान र बिकासका लागि क्रियाशिल छन् । १० रिटायर भएका छन् । १० मुसालाई अमेरिकाको चिडियाखानामा शान्तिको दूतको रुपमा राखिएको छ । बाँकी ससाना छन् ।
संस्थाले हरेक हप्ताको पाँच दिन मुसालाई बारुदी सुरुङ खोज्ने तालिम दिन्छ । अन्तिम दुई दिन भने मुसालाई भव्य पाटी दिइन्छ । एक मुसालाइृ तालिमका लागि महिनामा झण्डै ७ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यी मुसाको उमेर ८ देखि १० वर्षसम्म छ । यी मुसाले ६ देखि सात वर्षसम्म काम गर्न सक्छन् । यी मुसाले कुनै पनि ठाउँमा २० मिनेट भित्रमा एक टेनिस कोर्ट बराबरको बारुदी सुरुङ पत्ता लगाउन सक्छन् । मेटल डिटेक्टरको सहायतामा खोज्न चार दिनसम्म लाग्न सक्छ । यी मुसा बारुदी सुरुङ खोज्न शतप्रतिशत सफल भएका छन् ।